खड्गी इन्स्टिच्युटले मृगौला पत्थरीका बिरामीका लागि नि:शुल्क शल्यक्रिया शिविर गर्दै - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ कर्पोरेट ∕ खड्गी इन्स्टिच्युटले मृगौला पत्थरीका बिरामीका लागि नि:शुल्क शल्यक्रिया शिविर गर्दै
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७८ फागुन ५ गते, १३:११ मा प्रकाशित
काठमाडौँ – खड्गी इन्स्टिट्युट अफ इण्डोयुरोलोजीले विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क मृगौला र पत्थरीको शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ । आरुस लाइफ स्टाइल, नेपाल र रेड क्रेस्सेन्ट अफ कुवेतसँगको सहकार्यमा खड्गी इन्स्टिट्युट अफ इण्डोयुरोलोजीले विपन्न वर्गका लागि नि:शुल्क शल्यक्रिया शिविर सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
उक्त शिविरमा मिर्गाैला पत्थरी बिरामीले मिनी पीसीएनएल प्रविधिबाट निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने इन्स्टिच्युटका प्रबन्ध निर्देशक एवं कन्सल्ट्यान्ट युरोलोजिष्ट डा. सञ्जय खड्गीले बताए । मिनी पीसीएनएल ठुलो चिरफारबिना नै शल्यक्रिया हुने यो सेवा दुखाइरहित हुनुका साथै यसमा बिरामीको अस्पतालको बसाइ पनि अत्यन्त न्युन हुने डा. खड्गीको भनाइ छ ।
ललितपुरको कुपण्डोलस्थित रहेको यस इन्स्टिट्युटले स्थापना कालदेखि नै पीसीएनएल प्रविधिमार्फत बिरामीलाई सेवा दिदैँ आएको छ । इन्स्टिट्युटले परामर्श सेवा, औषधी तथा शल्यक्रियासमेत निःशुल्क रहने सो सेवाका लागि बिरामीले ४ फागुन देखि १५ फागुनसम्ममा आफ्नो नाम दर्ता गराइसक्नु पर्नेछ । शल्यक्रिया फागुण १८, १९ र २० गते हुने बताइएको छ ।
शिविरबाहेक इन्स्टिट्युटले अन्य समयमा पनि सरकारी दरमै हरेक दिन चार जना विपन्न बिरामीलाई मिर्गौला पत्थरीको शल्यक्रिया गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
एभरेष्ट अस्पतालले नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्दै, पोस्ट कोभिडको पनि परीक्षण…
अनुसन्धान इकाई विकास गर्दै मेडिसिटी अस्पताल